Mgbe Festọs na-eleba okwu Pọl anya (1-12)
“Achọrọ m ka Siza kpee ikpe a” (11)
Festọs gwara Eze Agrịpa gbasara Pọl (13-22)
A kpọpụtara Pọl n’ihu Agrịpa (23-27)
25 Mgbe o mere abalị atọ Festọs+ malitere ịchị Judia, o si Sizaria gaa Jeruselem. 2 Ndị isi nchụàjà na ndị isi ndị Juu gwara ya ihe na-adịghị mma gbasara Pọl.+ Ha malitekwara ịgwa ya 3 na otu ihe ọma ọ ga-emere ha bụ izi ozi ka a kpọta Pọl Jeruselem. Ma, ha nọ na-achọ ichechi Pọl n’ụzọ gbuo ya.+ 4 Ma, Festọs gwara ha na a kpọchiri Pọl na Sizaria, nakwa na yanwa ga-aga ebe ahụ n’oge na-adịghị anya. 5 Ọ gwakwara ha, sị: “Ka ndị isi unu soro m gaa ma kwuo ihe o mere, ma ọ bụrụ n’eziokwu na o mere ihe na-adịghị mma.”+ 6 N’ihi ya, mgbe ọ nọrọ ihe dị ka abalị asatọ ma ọ bụ abalị iri na Jeruselem, ọ gawara Sizaria. N’echi ya, ọ nọdụrụ n’oche ikpe ma kwuo ka a kpọbata Pọl. 7 Mgbe a kpọbatara ya, ndị Juu, ndị si Jeruselem, bịara guzoro ya gburugburu, na-ekwu ọtụtụ arụ ha sị na ọ kpara. Ma, ha enweghị ike igosi otú ihe ndị ahụ ha na-ekwu si bụrụ eziokwu.+ 8 Ma Pọl zaara ọnụ ya. Ọ sịrị: “Emebighị m Iwu ndị Juu. Emerụghị m ụlọ nsọ, emehieghịkwa m Siza.”+ 9 Ebe Festọs chọrọ ịzụrụ ụtọ ndị Juu,+ ọ jụrụ Pọl, sị: “Ị̀ chọrọ ịga Jeruselem ka a nọrọ ebe ahụ kpee gị ikpe n’ihu m?” 10 Ma Pọl sịrị: “Eguzo m n’ihu oche ikpe Siza. Ọ bụkwa ebe a ka e kwesịrị ikpe m ikpe. O dokwara gị anya na o nweghị ihe ọjọọ m mere ndị Juu. 11 Ma, ọ bụrụ n’eziokwu na m bụ onye ọjọọ, ọ bụrụkwa na m metere ihe e kwesịrị iji maka ya gbuo m,+ ka e gbuo m. Agaghị m arịọ ka a ghara igbu m. Ma ọ bụrụ na ihe niile ndị a na-ebo m ebubo ha abụghị eziokwu, o nweghị onye kwesịrị inyefe m n’aka ha iji zụrụ ụtọ. Achọrọ m ka Siza kpee ikpe a.”+ 12 Mgbe Festọs na ndị ndụmọdụ ya gbachara izu, o kwuru, sị: “Ebe ị sị na ị chọrọ ka Siza kpee ikpe a, ọ bụ Siza ga-ekpe ya.” 13 Ma mgbe abalị ole na ole gachara, Eze Agrịpa na Benis bịara Sizaria ka ha kelee Festọs. 14 Ebe ọ bụ na ha ga-anọ ọtụtụ ụbọchị ebe ahụ, Festọs gwara Eze Agrịpa okwu gbasara Pọl. Ọ sịrị: “E nwere otu nwoke Feliks hapụrụ n’ụlọ mkpọrọ. 15 Mgbe m gara Jeruselem, ndị isi nchụàjà na ndị okenye ndị Juu gwara m na o mere ihe ọjọọ,+ gwakwa m ka m ma ya ikpe. 16 Ma agwara m ha na e bo mmadụ ebubo, ndị Rom anaghị enyefe onye ahụ n’aka ndị boro ya ebubo iji zụrụ ụtọ. Kama, ha ga-ebu ụzọ kpọọ onye ahụ n’ihu ndị boro ya ebubo ka ha kwuo ya ihu na ihu, onye ahụ ejiri ohere ahụ zara ọnụ ya.+ 17 N’ihi ya, mgbe ha bịara ebe a, egbughị m oge ọ bụla, kama n’echi ya, anọdụrụ m ala n’oche ikpe ma kwuo ka a kpọbata nwoke ahụ. 18 Ndị boro ya ebubo biliri na-ekwu ọtụtụ ihe ha sị na o mere. Ma, ha eboghị ya ebubo arụ ndị m chere na ha ga-asị na ọ kpara.+ 19 Ihe na-esere ha okwu bụ ihe gbasara otú ha si efe chi ha*+ nakwa gbasara otu nwoke a na-akpọ Jizọs, onye mechara nwụọ, ma Pọl nọ na-ekwusi ike na ọ dị ndụ.+ 20 Ma, ebe ọ bụ na amachaghị m otú m ga-esi doziere ha okwu a, m jụrụ Pọl ma ọ̀ chọrọ ịga Jeruselem ka a nọrọ ebe ahụ kpee ikpe ya.+ 21 Ma mgbe o kwuru ka ya chere ruo mgbe Siza ga-ekpebi ikpe ya,+ m kwuru ka a kpọchie ya ruo mgbe m ga-akpọgara ya Siza.” 22 Agrịpa wee sị Festọs: “M ga-achọ ịnụ ihe nwoke ahụ ga-ekwu.”+ Festọs asị ya: “Ị ga-anụ ya echi.” 23 N’ihi ya, n’echi ya, Agrịpa na Benis kpaara nganga banye n’ụlọ a na-anọ ekpe ikpe, ha na ndị ọchịagha na ụmụ nwoke a ma ama n’obodo ahụ. A kpọbatakwara Pọl mgbe Festọs kwuru ka a kpọbata ya. 24 Festọs wee sị: “Eze Agrịpa na unu niile ndị so anyị nọrọ ebe a, nwoke a unu na-ahụ bụ onye ndị Juu niile nọ na-agwa m, na-eti mkpu, ma na Jeruselem ma n’ebe a, na o kwesịghịzi ịdị ndụ.+ 25 Ma achọpụtara m na o meghị ihe ọ bụla a ga-eji maka ya gbuo ya.+ N’ihi ya, mgbe o kwuru ka Siza kpee ikpe ya, ekpebiri m ịkpọgara ya Siza. 26 Ma, o nweghị ihe m ma m ga-edegara Onyenwe m Siza* gbasara ya. N’ihi ya, akpọtara m ya n’ihu unu, karịchaa n’ihu gị, Eze Agrịpa, ka m nweta ihe m ga-ede mgbe i lebachara anya n’okwu ya. 27 N’ihi na echeghị m na e kwesịrị iziga onye mkpọrọ Rom n’ekwughị ihe o mere.”
^ Ma ọ bụ “ihe gbasara okpukpe ha.”
^ Na Grik, “m ga-edegara Onyenwe m.”